Filohan’ny antenimieran-doholona : "Tsy hihemotra intsony ny datim-pifidianana" -
AccueilRaharaham-pirenenaFilohan’ny antenimieran-doholona : « Tsy hihemotra intsony ny datim-pifidianana »
Tontosa omaly ny fifamindram-pahefana teo amin’ny filohan’ny antenimieran-doholona vaovao Rivo Rakotovao, sy ny teo aloha Honoré Rakotomanana, tetsy amin’ny lapa maitso Anosikely. Natrehan’ ireo mambra eo anivon’ny governemanta sy ny filohan’ny antenimieram-pirenena ny lanonana , izay nahitana ireo mpiasa teo anivon’ity andrim-panjakana ity ihany koa. Nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataon’ny filohan’ny antenimieran-doholona, izay nohamafisiny nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety ihany koa ny hoe “hiditra amin’ny kihon-dalana iray lehibe eto amin’ny firenena isika amin’ny herintaona satria hiatrika fifidianana. Tsy tokony atahorantsika izany, satria mitady ny hanary toerana izany isika amin’izao fotoana izao mba tsy ho lasa ahiahy, satria fandresena izany” hoy hatrany i Rivo Rakotovao manoloana ny resa-be mandeha sy haparitaka. Anisan’ny noresahin’ny filohan’ny antenimieran-doholona ihany koa ny mikasika ny lalàm-panorenana, izay nambarany fa “efa nalefa ny adihevitra amin’ny andinihina ny andininy sasantsany ao anatin’ny lalàm-panorenana , izany no tena demokrasia satria tsy nanapa-kevitra samirery ny filoham-pirenena . Azony natao tokoa izany saingy naka ny hevitry ny rehetra ny tenany” hoy hatrany i Rivo Rakotovao .
Manoloana io resaka fifampidinihana mikasika ny lalàm-panorenana io tokoa, dia efa nanambara ny fitondram-panjakana fa tokony hisy ny fifampiresahana , ahafahana mahazo ny hevitry ny vahoaka. Ankilany moa dia efa nisy mihitsy aza ny fanazavana izay nentin’ny filoham-pirenena mikasika ny andininy faha-47 anatin’ny lalàm-panorenana, izay tena ahitana fifanoherena . Manoloana izay moa dia nanambara i Rivo Rakotovao izay filohan’ny antenimieram-pirenena fa “mba ahazoana ny hevitry ny rehetra dia isika eo amin’ny antenimieran-doholona dia hanamafy sy hanosika izany adihevitra izany”. Manoloana ny resaka fanemorana fifidianana kosa izay resahin’ny mpanohitra, dia nanambara i Rivo Rakotovao fa’’ tsy maintsy ho vitaina amin’ ny fotoana izay voafetran’ny lalàm-panorenana izany fifidianana izany”. Manoloana izany rehetra izany ihany koa dia niantso fitoniana ny filohan’ny antenimieran-doholona , mba ahafahana mijery ny fahafahana manatanteraka ny fifidianana . Teny ampamaranana dia nilaza i Rivo Rakotavao fa “tsy misy resaka fanemorana, na accord politika intsony ny mikasika ny fotoana hanatanterahana ny fifidianana fa io ny daty, fa daty hanatanterahana ny propagandy sy ny hanatanterahana azy no hiadiana hevitra “ hoy ny filohan’ny antenimieran-doholona.
Fikambanana iraisam-pirenena hiarahan’i Afrika Atsimo, Chine, Inde, Brésil ary Russie. Tanterahina atsy Afrika Atsimo nanomboka ny alarobia lasa teo ny fihaonana an-tampon’ny Brics izay ahitana ireo firenena ireo. Fihaonana izay hifantoka amin’ny resaka ara-toe-karena ankehitriny, ...Tohiny